September 29, 2019 - Myitter
သောမတ်စ်အယ်ဒီဆင် ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့ သောမတ်စ်အယ်ဒီဆင်အမေပြောခဲ့တဲ့ မုသားစကားတစ်ခွန်း…
September 29, 2019 Myitter 0
သောမတ်စ်အယ်ဒီဆင်ဟာ ကျောင်းစနေလို့ တစ်လအကြာ တစ်ရက်မှာ ကျောင်းက ပြန်လာတော့ ဆရာမပေးလိုက်တဲ့ စာအိတ်တစ်ခုကို သူ့အမေကို ပေးလိုက်ပါတယ်။ ငယ်သေးတော့ စာမဖတ်တတ်သေးခင်မှာ အမေဟာ စာအိတ်ကို ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ အယ်ဒီဆင်ကို ဖတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ သူ့ အမေဖတ်ပြတာက … “အမရဲ့ သားဟာ အလွန်ဥာဏ်ထက်မြက်ပြီး ပါရမီရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ […]
အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အဘိဝံသဘွဲ့ကြီး ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သော စစ်​ကိုင်း မြစကြာ​ကျောင်းတိုက်​က သာသနာ့အာဇာနည်
တစ်နှစ်မှ နှစ်ပါး ၊သုံးပါးလောက်သာပေါ်ထွက်တတ်တဲ့ အဘိဝံသ ဘွဲ့ဆိုတာ ကျက်မှတ်ဖြေဆိုရတာ ခက်ခဲလွန်းလို့ လူသတ်ပွဲ ရဟန်းသတ်ပွဲလို့တောင် နိုင်ငံကျော် ကမ္ဘာသိ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးက မိန့်ခဲ့ဖူးပါသတဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျော်လွန်သွားနိုင်သူဟာ အာဇာနည်တွေ ပါပဲ။ အဘိဝံသဆိုတဲ့ ဘွဲ့ထူးကို သိရှိသူတိုင်းဟာ တန်ဖိုးထားကြတယ်။ နိုင်ငံခြားသားများသည်ပင်လျှင် အဘိဝံသဆိုတာကို တန်ဖိုးထားပြီးတော့ လေးစားကြတယ် […]
တချိုးကလေးတွေ တောင်းရမ်းနေကြတဲ့အချိန်မှာ သားငယ်လေးကတော့ တောင်းမစားဘူး “ဦးဦး. . .ငုံးဥပြုတ် ၀ယ်ပါဦး” တဲ့
ဦးဦး ငုံးဥပြုတ် ဝယ်ပါဦးတဲ့…တချို့ဒီအရွယ်လေးတွေကို လူကြီးမိဘတွေကတောင်းရမ်းခိုင်းတယ်။ ဒီမိဘတွေကတော့ ဈေးရောင်းခိုင်းတာပေါ့။ ဘယ်လိုရောင်းတာလဲ သားသားဆိုတော့တစ်ထောင်ဖိုးလေးထုပ်၊ ဒါဆို ၅၀၀ ဖိုး ၂ ထုပ်ပေါ့ဆိုတော့ ဦး ယူရင် တစ်ထောင်ဖိုး ငါးထုပ်ယူလိုက်ပါတဲ့။ ဈေးအရောင်းတော်တယ်လို့ ပြောရမှာပဲ မြစ်ဆိပ်ဘက်က လာရောင်းတာတဲ့။ အစ်ကိုကြီးနဲ့လာရောင်းတာတဲ့လေ။ ဘဝဇာတ်ဆရာ အလိုကျ ကနေကြရတာ […]
သချိုင်းထဲက ဝေစုခွဲနေတဲ့ အသံတွေကြောင့် ပြေးလိုက်တာ ချော်လဲ သပိတ်ကွဲ ဆွမ်းငတ်ခဲ့ရတဲ့ ဆရာတော်
သချိုင်းထဲက ဝေစုခွဲနေတဲ့ အသံတွေကြောင့် ပြေးလိုက်တာ ချော်လဲ သပိတ်ကွဲ ဆွမ်းငတ်ခဲ့ရတဲ့ ဆရာတော် နောက်ကျတဲ့ခြေထောက်သစ္စာဖောက် ကလေးနှစ်ယောက် မာလကာခြံထဲကို ပိုင်ရှင်မသိအောင် ဝင်ပြီး အသီးတွေ ခိုးကြတယ်။ ရသမျှအသီးတွေကို ပုဆိုးတွေထဲ ထည့်ထုပ်ပြီး ဝေစုခွဲဖို့ လူပြတ်တဲ့သင်္ချိုင်းထဲကို သွားကြတယ်။ ပိုင်ရှင်သိရင် လိုက်ဖမ်းမှာစိုးလို့ အပြေးသွားတာမို့ […]
ကျောက်ဆည်ကနေ မန္တလေးထိတတ်ပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက် ထီလာရောင်းတဲ့ အဖိုးအို ကို အားပေးကြပါနော်…
ဒီအဘကိုတွေ့ရင် ထီဝါသနာပါပါမပါပါ အားပေးကြပါ အသက်က ၈၅နှစ် ထီဖွင့်ဖို့ ၁၀ရက်အလိုကြမှ ကျောက်ဆည်ကနေ မန်းလေးထိ ထီလာရောင်းတာပါ လမ်း၈၀အနီးတဝိုက်မှာပဲ များသောအားဖြင့်ရောင်းတာပါတဲ့။ ခုလည်း လမ်းမှာမောမောနဲ့ရေသောက်နေတာနဲ့ သနားလို့ဝင်ပေးခဲ့တယ် မနေ့ညကလည်းအိမ်နားမာ တွေ့လို့ထီအားပေးခဲ့ပါသေးတယ် တွေ့ရင် ကျော်မသွားပါနဲ့ လမ်းဘေးမှာထီထိုးရတာကိုမရှက်ကြပါနဲ့ Credit – Nay Lin Tun […]
ကင်ဆာရောဂါသည်နဲ့ တူနေတဲ့ ပဲခူးရိုးမတောကြီး
ကင်ဆာရောဂါသည်နဲ့ တူနေတဲ့ ပဲခူးရိုးမတောကြီး တချိန်တုန်းက နေပြောက်မထိုးနိုင်အောင် ထူလပ်လှတဲ့ ရိုးမတောကြီးဟာ အခုတော့ ကင်ဆာရောဂါသည်ကြီးနဲ့ တူနေပါပြီဗျာ။ ပုံတွေကိုသာ ကြည့်ကြပါတော့. ဘုရားစူးဗျာ။ ဒါကရိုးမကြီးပါ..ကျား​တွေ ဆင်​​တွေ​နေခဲ့တဲ့ ပျဉ်းမနားအ​ရှေ့ဘက်​​ကြောက ရိုးမကြီးပါ..ပူပြင်းတာလဲမ​ပြောနဲ့​လေ။ လူယုတ်​မာ​တွေ အုပ်​ချုပ်​တုန်းက လူတိရစ္ဆာန်​​တွေ ကိုယ့်​အကျိုးတွက်​. မစဉ်းစား မဆင်​ခြင်​ ခုတ်​ပစ်​လိုက်​တဲ့ဒဏ်​ကို အများစုကခံ​နေကြရတာ […]
စစ်ကိုင်း(အင်းဝ)တံတားပေဲါမှ အသက် ၅၂နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦး ဧရာဝတီ မြစ်အတွင်းခုန်ချမှု ဖြစ်ပွား စစ်ကိုင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ စစ်ကိုင်း(အင်းဝ)တံတားပေဲါမှ အသက် ၅၂နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦး ဧရာဝတီ မြစ်အတွင်း စက်တင်ဘာ ၂၉နံနက်ပိုင်းတွင်ခုန်ချမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၉နံနက် ၁၀နာရီကျော်ခန့်က စစ်ကိုင်းမြို့မင်းလမ်းရပ်နေ ဦးနိုင်အောင်ရင် ၅၂နှစ်သည် စစ်ကိုင်းဘက်မှ […]
Winner ဖြစ်မယ်လို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ခန့်မှန်းခြင်းခံနေရတဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးမြန်မာအိုင်ဒေါလ် ပြိုင်ပွဲဝင်လေး
Winner ဖြစ်မယ်လို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ခန့်မှန်းခြင်းခံနေရတဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးမြန်မာအိုင်ဒေါလ် ပြိုင်ပွဲဝင်လေး အေးမြဖြူ မြန်မာအိုင်ဒေါလ် အဆိုပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ Season – (4) ထိရောက်ရှိခဲ့ပြန်ပါပြီနော်။ မြန်မာအိုင်ဒေါလ် အဆိုပြိုင်ပွဲကြီးကနေ Season တစ်ခုပြီးတိုင်းလည်း အရည်အချင်းရှိပြီး အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တွေကို ထွက်ပေါ်လာစေတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ မြန်မာအိုင်ဒေါလ် Season – […]
နားပင်း၊နားလေးသူများ အတွက် ဆရာတော်ပေးသည့် ရှမ်းဆေးတစ်ခွက်
နားလေး၊ နားပင်း ရောဂါအတွက် ပွဲတွေ့ဆေး လူသားများသည် ”ရုပ္ပတီတိရူပံ” ဆိုသည့်အတိုင်း ရုပ်သဘောသည် အမြဲဖောက်ပြန်နေကြပါတယ်။ ခန္ဓာရှိရင် ဝေဒနာရှိသည်မို့—- ယခုတင်ပြမည့်ဆေးနည်းကား ရဟန်းမယ်တော်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ခဲ့သော နားလေးနားပင်းရောဂါပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ပူအိုက်သော ညများမှာ အသက်ကြီးသူတို့အတွက် အေးလွန်း၍လည်း မရပါ။ ပူလွန်း၍လည်း မရပါ။ တံခါးပေါက်ဖွင့် အိပ်မိရက်သား […]
အမေ့ကိုဖမ်းပါဆိုပြီး လက်လေးထိုးပေးတဲ့ အမေအိုကြီးကို ကြည့်ရင်း မျက်ရည်ဝိုင်းခဲ့ရတဲ့ ရဲတွေ။
အမေ့ကိုဖမ်းပါဆိုပြီး လက်လေးထိုးပေးတဲ့ အမေအိုကြီးကို ကြည့်ရင်း မျက်ရည်ဝိုင်းခဲ့ရတဲ့ ရဲတွေ။ “မိခင်မေတ္တာကြီးမားပေစွ” ဒီပုံကို ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရင် အများစုက ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်လို့ မြင်ကြလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကတော့ ဒီပုံမှာ မိခင်မေတ္တာကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှ အပြစ်မတင်ပါဘူး။အလွဲတွေနဲ့ နိုင်ငံမှာ ဒီအလွဲဟာလည်း အလွဲပေါင်းများစွာထဲက အလွဲတစ်ခုပါပဲ။ ဒီအသက်အရွယ်၊ […]